D/Hoose ee Hargeysa oo Bilowday Dhismaha Jid Halbowle ah oo ku Yaalla Degmada Axmed Dhagax |
D/Hoose ee Hargeysa oo Bilowday Dhismaha Jid Halbowle ah oo ku Yaalla Degmada Axmed Dhagax
“Waxaan dadkii waddadan dhismaheeda nashuushadeynayay aan leeyahay wax ku soo darsada qaadhaanka jidkan”
Hargeysa(Gudgude)-Dawladda Hoose ee caasimadda, ayaa maanta si rasmi ah u bilowday casriyanta iyo dib-u-dhiska waddo hawlbowle ah oo ku taalla degmada Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, waddadan oo ah jidka dheer ee hormarta cusbitaalka Edna oo aad burbursanayd.
Sidaasna waxa daboolka ka qaaday Xoghayaha fulinta D/Hoose Hargeysa, Cali Xasan Cawaalle, waxaanu sheegay inay maamul ahaan ku faraxsan yihiin hagaajinta waddadan muhiimka ah; “ILaahay ayaa mahad leh, waxa sharaf noo ah in maanta (shalay) 18.10.2017. uu maamulka D/hoose ee Hargeysa uu si rasmi ah u bilaabay dhismaha waddadii hor marta Cusbitaalka Edna Aadan oo muddo 25 sanno ah aan waxba laga qaban, waxay ka mid tahay waddooyinka halbawlaha ee magaalada Hargeysa,”ayuu Xoghayaha Dawladda Hoose, Cali Xasan Cawaalle ku yidhi qoraal uu ku baahiyay bartiisa Facebook.
Isagoo ka hadlayay siday xuddunta u tahay jidkan ay casriyaynayaan, wuxuu yidhi; “Waddadani waxay isku xidhaysaa jidadka Isgoyska Tootal, xaafadda October, cusbitaalka Edna, Siinay, Garoonka kubadda cagta ee Hargeysa Stadium, xaafadda haaf London, Birjeex, Isha Boorame, Jaamacadda Hargeysa ilaa xaafadda Pepsiga. Waxaanay saamayn ku leedahay jidadkaas oo dhan.”
Xoghayuhu wuxuu ku dooday inay dhammaatay beentii, waxaanu farriin u u diray dad uu ku tilmaamay inay siyaasad ka dayayeen jidkan; “Waxaan aad ugu faraxsanahay bilowga jidkan oo bulshada u leh muhiimad weyn. Waxaan fariin halkan uga diraya dhammanba dadkii faro ku tiriska ahaa ee waddadan dhismaheeda nashuushadaynayey ama ka dhiganayey kaambayn siyaasadeed isla markaana baraha bulshada muuqaalada siyaasadaysan soo dhigayey,”ayuu yidhi Cali Xasan Cawaalle.
Waxa kaloo uu intaas ku daray; “Waddadani way socotaa ee haddii wixii aad ku hadlayseen damqasho idinka ahayd wax ku soo darsada qadhaanka karaankiin. Waxaan u mahad celinaya bulshadii ka qaybqaadatay qaadhaanka waddadan lagu dhisayo.”